TopNews: Howlgalkii Hubka dhigista Muqdisho oo Sababo lama filaan ah loo joojiyay – Yaa ka dambeeyay? – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
by nairobi 10th July 2017 0131
Muddooyinkii dambe dowladda Federaalka Somalia ayaa waday barnaamij ay ugu magac dartay xasilinta caasimadda, kaasoo ay usoo diyaarisay ciidan gaar ah oo hub ka dhigis ka waday magaalada Muqdisho.
Intii uu socday howlgalkaasi la magac baxay xasilinta Caasimada ayaa waxaa lagu soo qabtay hub yar yar, kuwaasi oo laga soo qabtay qaar kamid ah dagmooyinka gobolka Banaadir oo laga fuliyay howlgalladaasi, iyadoo dadka ugu badan ee hubka lagasoo qaaday ay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda kuwaasoo hubka kula dhex laafyoonayay wadooyinka magaalada Muqdisho.
Hayeeshee, qorshaha hub ka dhigista ay dowladda ka waday magaalada Muqdisho ayaa waxaa kasoo horjeestay dad badan, halka dadka qaarna ay soo dhaweeyeen. Dadka kasoo horjeestay arintani ay sabab uga dhigeen, dalka oo aanay nabadi ka jirin iyo naftooda oo Qatar galeeyso hadii ay dowladda ka qaado hubka ay isku difaaci lahaayeen maadaama ay dowladdu aanay damaanad qaadi Karin ammaankooda oo iyadaba ay teeda ka badin la’dahay.
Howlgalka hub ka dhigista ayaa si aad ah u socday maalmihii ugu horeeyay iyadoo sidoo kale ciidanka loo xilsaaray u muuqdeen kuwo u caaboon howsha loo xil saaray waxaana shaqada ay wadeen laga dareemi karay wadooyinka magaalada Muqdisho.
Si kastaba ha’ahaatee, waxaa jiray waxyaabo wanaagsan oo ay qabteen ciidanka xasilinta kuwaasoo ay mudanyihiin in lagu amaano, waxaana kamid ah, in wadooyinka magaalada Muqdisho laga waayay askartii qoryaha la dhex socon jirtay iyo sidoo kale askartii dusha ka saarnayd gawaarida dagaalka ee dadka shacabka ah indhaha qoryaha ka galin jiray ama mararka qaar ugeysan jiray falal dil iyo jirdil isugu jiray.
Howlgalka oo ahaa mid ku socda si isdaba joog ah ayaa markii dambe mar qura istaagay iyadoo la waayay cid hadal heeysa, iskaba daaye in dowladda ay ka hadasho ama ay soo bandhigto hubkii ay ciidamada howlgallada kusoo qaban jireen howlgalada mudada kooban socday.
Maxaa iska bedelay Howlgalkii hub ka dhigista?
waxyaabah iska bedelay qorshihii hub ka dhigista ayaa ah in hub ka dhigistii ka soctay magaalada Muqdisho hakad la galiyay sababo la xiriira culeeys dowladda kasoo food saaray arrintaasi.
Xogta aan helnay ayaa sheegeysa in dowladda culeeys uu kasoo food saaray qaar kamid ah siyaasiyiinta waaweeyn ee kasoo jeeda magaalada Muqdisho, kadib markii barnaamijika hub ka dhigistu ay u fasireen qaab siyaasadeeysan taasoo dowladda u ogolaan weeysay inay sii wado barnaamijka hubka dhigista oo sida muuqatar uun ku koobnaa magaalada Muqdisho.
Siyaasiyiintaan oo ah kuwo caan ah ayaa la sheegay in dowladda ay u gudbiyeen cabashadooda iyo sida aysan ugu qanacsaneeyn hub ka dhigista ka socta magaalada Muqdisho, isla markaana ay u arkaan mid dan gaar ah laga leeyahay.
Qorshaha hub kadhigista amagaalda Muqdisho ayaa haa amid ay kuhungoobeen dowlado kahoreeyay dowlada iminka wadanka katalisa, kuwaasi oo ugu dambeyntii meesha kasaaray qorshayaashaasi oo fasiraad kala duwan ay kabixiyeen siyaasiyiinta kusugan magaalada.
Si kastoy ahaataba, dowladda federaalka oo u muuqatay mid markii horeba culeys weyn kala kulmeeysay howlgalka hub ka dhigista ee ku eg magaalada Muqdisho isla markaana waqtiyadii dambe wajeheeysay in qorshahaasi waji cusub loo yeelay ayaa hakad galisay howlgalkaasi sida aan kasoo xiganay ilo xog ogaal ah,iyadoo aanan la garaneyn mudada uu hakadkaas ku jiri doono howlgalka iyo hadii ay dowladda federaalka la imaan doonto qorsheyaal kale.
XOG DEG DEG AH: RW Kheyre oo ka guuleystay Xildhibaanadii Mooshinka Waday & Kulamo dhacay
DEG DEG: Jubbaland, koonfur galbeed iyo puntland oo mowqif adag ka qaatay xukuumadda shalay la magacaabay
DEG DEG+SAWIRRO: Xasan Shiikh oo kusoo biiray Xildhibaano Magaalada Nairobi ka wada Shirqool lagu dumin rabo Xukuumadda Kheyre